Iwu na ụbọchị izu ike megide ọgbụgba ndụ ọhụrụ - IntegritySyndicate.com
Mbido Post Iwu na Ụbọchị Izu Ike megide ọgbụgba ndụ ọhụrụ
Iwu Iri ahụ na Iwu Mozis
Mmalite nke idebe Ụbọchị Izu Ike
Ụbọchị izu ike anyị bụ Kraịst
Ememe Ngabiga anyị bụ Kraịst
Ememe, ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike - onyinyo nke ihe ndị na -abịa
Nnwere onwe anyị n'ime Kraịst
Ihe egwu dị n'iwu
Chukwu choro ebere karia aja
Jizọs kpuchiri Iwu ahụ
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ ntụgharị asụsụ ndị Juu nke Deuterọnọmi 5:22. (Soncino Chumash, A. Cohen, ed., Soncino Press, 1968, p. 1019). Nkwupụta kpọmkwem nke iwu si na Saịnaị '' akwụsịghị ọzọ. Ọ bụghị (dị ka nsụgharị ndị ọzọ na -egosi) ka Chineke gbakwunyereghị okwu ọzọ, si otú a na -eme ka iwu iri bụrụ iwu pụrụ iche nke dị iche na iwu ndị ọzọ, kama na ndị mmadụ, dịka akụkọ ahụ gara n'ihu na -ekwu (Deut. 5: 22-28), enweghị ike ịnụrụ ịnụ olu Chineke. Na nzaghachi Chineke gara n'ihu na ọkwa nke iwu ahụ site n'aka Moses. N'ọnọdụ a, a na -ekewapụta iwu iri ahụ na iwu ndị ọzọ n'ihi na Chineke kwụsịrị ya site n'oké egwu nke ndị mmadụ. Ọ nweghị ebe ekwuru na iri niile (nke gụnyere iwu izu ike nke na -anọchite anya usoro izu ike niile) dịịrị mmadụ niile n'oge niile. Iwu iri ahụ bụ akụkụ nke usoro iwu niile enyere Israel. Na 2 Ndị Kọrịnt 3 Pọl kpachaara anya were ọdịiche dị n'etiti nwa oge iwu iri dị ka usoro iwu na mmụọ ọhụrụ nke iwu nke e ji mara okwukwe Ndị Kraịst. Usoro ochie “bịara n'ebube” (v. 7), mana otuto a karịrị nke nlekọta ọhụrụ nke mmụọ. Iwu nke enyere na Saịnaị ka edere na mbadamba nkume (nrụtụ aka n'iwu iri dị na Ọpụ. 34:28, 29), mana “akwụkwọ ozi” nke mmụọ nke Kraịst dere n'ime obi (v. 3) dị elu nke ukwuu. . Paul ikọdọhọke ke ibet oro ẹkenọde ebe ke Moses ekedi “nsinsi ibet Abasi.”
N'Ọrụ Ndịozi 15 enwere ọgbakọ iji lebara nsogbu ahụ siri ike nke ụfọdụ ndị Juu bụ Ndị Kraịst na -akụzi anya na ọ gwụla ma e bipụrụ gị dị ka omenala Moses si dị, na a gaghị azọpụta gị ... ụfọdụ ndị kwere ekwe bụ ndị Farisii biliri kwuru, sị: 'Ọ dị mkpa ka e bie ha úgwù, na inye ha iwu ka ha debe iwu Mozis' ”(Ọrụ 15: 1, 5). Nzaghachi Pita na -egosi nnukwu mgbanwe nke iwu nke Chineke na Mezaịa nyere ndị otu mba ụwa nke Kraịst: “Ya mere, gịnị mere unu ji anwale Chineke site n'itinye yoke n'olu ndị na -eso ụzọ n'olu nke nna anyị ma ọ bụ anyị enweghị ike iburu? Ma anyị kwenyere na a ga-azọpụta anyị site na amara nke Onyenwe anyị Jizọs, dịkwa ka ha ga-azọpụta ”(Ọrụ 15: 10-11). Ọ ga -abụ ihe megidere Akwụkwọ Nsọ ozugbo ikwu na Torah n'ụdị Mosis bụ ngọzi na -enweghị atụ maka Israel! Enwere ọtụtụ ihe ezubere dịka ịdọ aka na ntị siri ike na ebumnuche ya bụ iwu ihe mgbochi n'etiti Israel na mba dị iche iche. N'okpuru ọgbụgba ndụ ọhụrụ, dị ka Pita kọwara, ugbu a, Chineke enyela ndị Jentaịl na ndị Juu mmụọ nsọ, “O meghịkwa ihe dị iche n'etiti anyị na ha, kama o ji okwukwe mee ka obi ha dị ọcha” (Ọrụ 15: 9). Ọ bụ ịnabata ozi ọma nke alaeze nke Chineke nke mere ka obi onye ọ bụla kwere na Oziọma ahụ dị ka Jizọs kwusara ya (Mak 1: 14-15; Mak 4: 11-12; Mat. 13:19; Luk 8) : 11-12; Jọn 15: 3; Ọrụ 26:18; Rom 10:17; 5 Jọn 20:53; Aịsaịa 11:XNUMX).
Pọl zoro aka na ọgbụgba ndụ Saịnaị, n'oge ahụ ka enyere iwu iri, na -eduga n'ịbụ ohu: "Ọgbụgba ndụ nke si n'ugwu Saịnaị pụta na -amụ ụmụ ndị ohu" (Gal 4:24). N’akụkụ ọzọ, Pọl kọwara mbadamba nkume abụọ ahụ, nke nwere ike ịbụ mbipụta abụọ nke iwu iri ahụ, dịka “ozi nke ikpe ọmụma na ọnwụ” (2 Kọr 3: 7-9). Iwu iri ahụ abụghị okwu ikpeazụ Chineke gwara mmadụ. Ha bụ usoro iwu nke nwa oge ka a ga -eji iwu dị elu dochie anya taa nke gbadoro ụkwụ n'okwu Jizọs na ndị ozi: Anyị kwesịrị ị paya ntị na "okwu nke ndị amụma dị nsọ kwuru na mbụ, na iwu nke gị. Ndị ozi nke Onyenwe anyị na Onye nzọpụta họpụtara ”(2 Pita 3: 2). Okwu ọgbụgba ndụ ọhụrụ ndị a abụghị n'ezie ikwughachi Moses.
Dabere na Jenesis 2: 2, 3 na Ọpụpụ 20: 8-11, a na-arụkarị ụka na e guzobere ụbọchị izu ike na okike dịka izu ike izu ụka maka mmadụ niile site na Adam gaa n'ihu. Ihe ndekọ a nke mbido idebe izu ike kwa izu na-eleghara eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ anya:
Ọpụpụ 16:23: Chineke kpughere ụbọchị izu -ike nye Israel. Onye -nwe kwuru, "Echi bụ idebe ụbọchị izu ike, ụbọchị izu ike dị nsọ nye Onyenwe anyị." Enweghị ntụpọ ebe a na izu ike nke ụbọchị asaa nọ na-arụ ọrụ kemgbe okike. Chineke asịghị: “Echi bụ ụbọchị izu ike nyere mba niile site na okike.” Mozis gbakwụnyere, sị: “Lee, Jehova enyewo [Izrel] ụbọchị izu ike; ya mere Ọ na -enye unu nri ụbọchị abụọ n'ụbọchị nke isii. Nọdu, nwoke ọ bula n'ọnọdu -ya; ka onye ọ bụla ghara isi n'ọnọdu ya pụta n'ụbọchị nke asaa "(Ọpụ. 16:29). Ọ bụrụ na Chineke nyere Israel ụbọchị izu ike na Ọpụpụ 16, Ọ na -ewepụ ya na mmadụ niile? Ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụrụ na ekpughere idebe Ụbọchị Izu Ike dịka iwu sitere n'aka okike site na okike maka mba ọ bụla, Chineke ga -akọwapụta Israel ugbu a dị ka mba kwesịrị idebe Ụbọchị Izu Ike.
Nehemaịa 9:13, 14: Isi mmalite ụbọchị izu ike abụghị n'ike ihe, kama na Saịnaị: “Ị rịdatara n'ugwu Saịnaị, gị na ha wee si n'eluigwe gwa ha okwu; I nyere ha ikpe ziri ezi na ezi iwu, ezi ụkpụrụ na iwu. I wee mee ka ha mara Ụbọchị Izu Ike gị dị nsọ, wee nye ha iwu, ụkpụrụ na iwu site n'aka ohu gị Moses. "
Nehemaịa 10: 29-33: Izu-ụka izu ụka bụ akụkụ nke iwu Chineke nke enyere site na Mosis wee bụrụ akụkụ nke usoro mmemme niile nke ụbọchị izu ike nke ekpughere na Saịnaị: iwu, nke enyere site n'aka Moses, nwa odibo Chineke, na idobe na idobe iwu niile nke Chineke Onye -nwe anyị, na emume ya na ụkpụrụ ya ... ree, anyị agaghị azụta n'aka ha n'ụbọchị izu ike ma ọ bụ ụbọchị nsọ; anyị ga -ahapụkwa ihe ubi n'afọ nke asaa ... ụbọchị izu ike, ọnwa ọhụrụ, maka oge a kara aka, maka ihe nsọ na maka àjà mmehie iji kpuchiere Israel mmehie, na maka ọrụ nile nke ụlọ nke Chineke anyị. ” Rịba ama na ejikọtara Israel na usoro izu ike na ụbọchị nsọ.
Ebumnuche nke ụbọchị izu ike, n'agbanyeghị na ọ na -egosipụta izu ike Chineke na okike, bụ iji mee ememe ncheta Ọpụpụ mba Israel site n'Ijipt. Ọ bụ ya mere e ji nye iwu nke anọ: “Cheta na ị bụ ohu n'ala Ijipt, na Onyenwe anyị Chineke gị ji aka dị ike na ogwe aka gbatịrị agbatị kpọpụta gị; ya mere Onye -nwe Chineke gị nyere gị iwu (Israel, ọ bụghị mmadụ site na okike) idebe ụbọchị izu -ike ”(Deut. 5:15).
Ọgbụgba ndụ nke ya na Israel gbara na Horeb abụghị nke ya na ndị nna (Abraham, Aịzik na Jekọb). Ya mere, iwu iri ahụ enweghị ike ịnọchite anya ụfọdụ iwu zuru ụwa ọnụ nke enyere mmadụ niile. Okwu ahụ dị na Deuterọnọmi 5: 3 bụ nke a kapịrị ọnụ: “Jehova esoghị nna anyị mee ọgbụgba ndụ a.” E nyere Israel ụbọchị izu ike ka ọ bụrụ ihe nnọchianya nke mmekọrịta pụrụ iche nke Chineke na Izrel, “ka ha wee mara na mụ onwe m bụ Jehova na -edo ha nsọ” (Ezik. 20:12). Nke a agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na achọrọ mba Ụbọchị Izu Ike. Ọ bụ akara pụrụ iche nke mmekọrịta Chineke na otu mba, Israel.
Ekwesịrị ka ekwenye ndị Juu na nghọta ụfọdụ banyere mmalite nke ụbọchị izu ike mba ha. Na jubilii 2: 19-21, 31 anyị na-amụta na: "Onye kere ihe niile ... edoghị ndị niile na mba niile nsọ idobe ụbọchị izu ike n'elu ya, kama ọ bụ naanị Izrel."
Nkwenye nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ anyị kpọtụrụ aha n'elu sitere n'akwụkwọ ndị rabaị. Jenesis Rabbah na -ekwu na ụbọchị nke asaa nke okike bụ ụbọchị izu ike nke Chineke, mana ọ bụghị nke mmadụ. Na Mishnah dị n'okpuru Shabbata, anyị na -ahụ na “ọ bụrụ na onye mba ọzọ abịa imenyụ ọkụ ahụ, ha agaghị asị ya, 'emenyụla ya,' ebe ọ bụ na ha [Israel] agaghị aza ajụjụ maka idebe Ụbọchị Izu Ike.” Ihe kpatara nke a bụ na "Ụbọchị Izu Ike bụ ọgbụgba ndụ ebighi ebi n'etiti mụ na ụmụ Izrel, mana ọ bụghị n'etiti mụ na mba ụwa" (Melkita, Shabbata, 1).
Site na amaokwu ndị a, o doro anya na usoro iwu niile, gụnyere izu ụka izu ụka, ụbọchị izu ike izu nke asaa (Pentikọst), ụbọchị izu ike nke ọnwa nke asaa (opi), ọnwa ọhụrụ na ụbọchị nsọ ndị ọzọ. , ala nke afọ nke asaa nke izu ike na afọ jubilii mgbe afọ iri anọ na itoolu gasịrị, bụcha akụkụ nke usoro izu ike nke enyere Israel site n'aka Moses. Izu ike kwa izu bụ ncheta ncheta Ọpụpụ Israel (Deut 5:15). Ya mere, Ezikiel kwuru na Chineke “wepụtara [Izrel] n'ala Ijipt wee kpọba ha n'ọzara. M nyere ha ụkpụrụ m wee mee ka ha mara ikpe m, nke ọ bụrụ na mmadụ debe ha, ọ ga -adị ndụ. M nyekwara ha ụbọchị izu ike m ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama n'etiti mụ na ha [Izrel], ka ha wee mara na mụ onwe m bụ Jehova na -edo ha nsọ... ha gābu kwa ihe-iriba-ama n'etiti Mu na unu, ka unu we mara na Mu onwem bu Jehova Chineke-unu ”(Ezik 20: 10-12, 20).
Site na data a, ọ gaghị ekwe omume ịkọwa na e nyere usoro mmadụ ụbọchị izu ike iwu site na okike gaa n'ihu. Amaokwu Akwụkwọ Nsọ ndị a, nke ihe odide ndị Juu ndị ọzọ kwadoro, na -arụtụ aka n'Ụbọchị Izu Ike dịka akara pụrụiche nke mmekọrịta Chineke na otu mba ahọpụtara. Ebe Deuterọnọmi 5:15 kwuru na Ọpụpụ si na Ọpụpụ, gịnị kpatara Ọpụpụ 20:11 ji jikọta ya na okike? Azịza ya bụ na Chineke zuru ike n'ezie n'ụbọchị nke asaa na okike. Agbanyeghị, ederede (Jenesis 2: 3) ekwughị na O nyeziri Adam na mmadụ iwu izu ike ụbọchị nke asaa niile. Ọ bụrụ na O kwuru nke a, Ụbọchị Izu Ike enweghị ike ịbụ ihe ncheta Ọpụpụ Israel (Deut 5:15). Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ na -agụhie ederede dị na Jenesis 2: 3 ịpụta na Chineke zuru ike n'ụbọchị nke asaa wee gọzie ụbọchị asaa ọ bụla na -esote site na mgbe ahụ gaa n'ihu, na -enye ụmụ mmadụ iwu ka ha zuru ike n'ụbọchị ahụ. N'ezie, ọ bụ naanị Chineke zuru ike n'okike na naanị n'ụbọchị nke asaa nke mechiri okike Ya. Ọ bụ ruo mgbe ọtụtụ puku afọ gachara ka O jiri ezumike nke ụbọchị nke asaa ya na okike dị ka ihe atụ iji webata ụbọchị izu ike ọ bụla enyere Israel. Naanị Chineke zuru ike n’ụbọchị nke asaa nke mbụ ma mechaa kpughere Israel ụbọchị nke asaa dịka idebe izu ike na -adịgide adịgide (Ọpụ 16). Ụbọchị izu ike na-apụta n'ime iwu iri, nke chịkọtara iwu e nyere site n'aka Moses nye Israel, mana agaghị ekewapụ ya na usoro izu ike izu ike nke enyere Israel, kwa izu, kwa ọnwa, kwa afọ, afọ asaa na n'afọ jubilii. .
Claus Westermann, na nkọwa ya na Jenesis 1-11, chịkọtara ihe ọ chọpụtara gbasara mmalite nke Ụbọchị Izu Ike: “N'ezie mmadụ enweghị ike ịchọta ụlọ ọrụ, ọbụnadị nkwadebe maka ụbọchị izu ike, kama nke ahụ, a na-egosipụta ntọala ikpeazụ nke ụbọchị izu ike. na ahịrịokwu ndị a ”(p. 237)
A gụpụrụ Jizọs na ndị na -eso ụzọ ya ụbọchị izu ike nke asaa
Matiu kwuru na iwu ejighị ụbọchị izu ike agbachi ndị nchụàjà na -arụ ọrụ n'ụlọ nsọ ahụ (Mat. 12: 5). Ọ bụghị mmehie ndị nchụàjà ahụ imebi Ụbọchị Izu Ike. Dị ka Jizọs kwuru, ya na ndị na-eso ụzọ ya na-anọchite anya ọkwa nchụàjà ime mmụọ ọhụrụ (Mat 12: 4-5) na ya onwe ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà. Idebe ụbọchị izu ike nke asaa bụ akụkụ nke usoro ochie. Anyị nwere ike ikwu nke ọma na iwu ahụ, site n'ịhapụ ndị nchụàjà n'iwu izu ike mgbe ha na -arụ ọrụ n'ụlọ nsọ, na -ese onyinyo nnwere onwe Ndị Kraịst pụọ n'iwu izu ike mgbe ha na -arụ ọrụ Chineke kwa ụbọchị n'izu. Ekwela ka onye ọ bụla kpee gị ikpe gbasara mmemme, ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike (Ndị Kọlọsi 2:16) Dịka ịchụ aja agba ochie bụ onyinyo Kraịst, otu ahụ ka ụbọchị izu ike dị (Col 2: 17) . Ọpụrụiche ndị nchụàjà site n'idebe Ụbọchị Izu Ike rụtụrụ aka n'oge ndị na-erubere Chineke isi ga-eme ya site na irube isi n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke zuru oke, ọ bụghị dị ka nke ahụ Chineke mere nna (Hib 8: 7-13) A na -ewu nkume dị ka ụlọ ime mmụọ, ka ọ bụrụ ọkwa nchụ -aja dị nsọ, na -achụ aja ime mmụọ nke Chineke na -anabata site n'aka Jizọs Kraịst. (1Pet 2: 5) N'ime Kraịst anyị bụ ndị ahọpụtara, ọkwa nchụaja eze, mba dị nsọ, ndị nke ya. (1 Pita 2: 9) Jizọs hụrụ anyị n'anya wee jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị wee mee anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya (Mkpu 1: 5-6, Rev 5:10, Rev 20: 6) . Dịka òtù ndị nchụ -aja nke eze, Kraịst na ndị nọ n'ime Kraịst enweghị ikpe ọmụma na -emerụ ụbọchị izu ike. (Mt 12: 5) Kraịst bụ ụbọchị izu ike anyị (Mat 11: 28-29). Ọ sịrị m bịakwute m, m ga -enyekwa gị izu ike n'ihe gbasara ndị na -eso ụzọ ya ebubo ebubo imebi ụbọchị izu ike. (Matt 11: 28-30 sochiri Matt 12: 1-8) Taa bụ ụbọchị ịbanye n'izu ike nke Chineke-taa ọ bụrụ na ị nụrụ olu ya emela ka obi unu sie ike. (Hib 4: 7) A sị na Jọshụa nyere ha ezumike, Chineke agaraghị ekwu maka ụbọchị ọzọ ka e mesịrị. (Ndị Hibru 4: 8) Ụbọchị abịawo, ezumike dịkwaịrị ndị Chineke (Ndị Hibru 4: 9-10). Ya mere, gbalịa ịbanye n'izu ike ahụ, ka onye ọ bụla ghara ịda n'otu ụdị nnupụisi ahụ - obi kpọrọ nkụ. (Ndị Hibru 4:11) Nkwa nke ịbanye n'izu ike nke Chineke ka dị, n'ihi na anyị bụ ndị kwere ekwe na-abanye n'izu ike ahụ (Hib 4: 1-3)
Matiu 12: 1-7 Ndị nchụàjà nọ n'ụlọ nsọ ahụ na -emerụ ụbọchị izu ike, ha enweghịkwa ikpe ọmụma
1 N'oge ahụ Jizọs gafere ubi ọka n’ụbọchị izu ike. Agụụ gụkwara ndị na -eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ụyọkọ ọka wit na -eri. 2 Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya,Lee, ndị na -eso ụzọ gị na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike. " 3 Ọ sịrị ha, “Ọ bụ na unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na -agụ ya na ndị ya na ha nọ: 4 otu o siri banye n'ụlọ Chineke wee rie achịcha nke ọnụnọ, nke iwu akwadoghị ka o rie ma ọ bụ maka ndị ya na ha nọ, kama naanị maka ndị nchụàjà.? 5 Ma ọ bụ na ị gụbeghị n'ime Iwu ahụ ka ndị nchụàjà nọ n'ụlọ nsọ si emebi ụbọchị izu ike ma bụrụ ndị ikpe na -amaghị? 6 Asim unu, na ihe kariri ulo uku Chineke nọ n'ebe a. 7 Ọ buru kwa na unu matara ihe okwu a bu, Anamachọ ebere, ọ bughi àjà, unu agaghi -amawori ndi ikpe nāmaghi.
Ndị Kọlọsi 2: 16-17 (ESV), ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe gbasara mmemme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike.
Ndị Hibru 8: 6-13 (Mkpu), M ga-eguzobe ọgbụgba ndụ ọhụrụ ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ mụ na nna nna ha gbara
6 Mana ka ọ dị, Kraịst enwetala ozi nke dị oke mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ nke ọ na -eme ka ọ dị mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma.. 7 N'ihi na asi na ọb covenantub covenanta -ndu mbu ahu bu ihe n faultnweghi ntupọ, agaghi -enwe kwa oge ichere nke -abua. 8 n'ihi na ọ na -ahụta mmejọ ha mgbe ọ sịrị: "Le, ubọchi nābia, (ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta), mgbe m ga -ehiwe ọgbụgba ndụ ọhụrụ ya na ulo Israel na ulo Juda, 9 ọ bụghị dị ka ọgbụgba ndụ mụ na nna nna ha gbara n’ụbọchị m jidere ha n’aka ka m kpọpụta ha n’ala Ijipt. N'ihi na ha adighi -anọgide n'ọb covenantub mya -ndum, M'we cheb foru ha, ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta. 10 N'ihi na nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ụlọ Izrel ga -agba mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Onye -nwe -anyị kwuru: M ga -etinye iwu m n'obi ha, ma dee ha n'obi ha, M'gābu -kwa -ra ha Chineke, ha gābu -kwa -ram otù ndi. 11 Ha agaghị akụzi, onye ọ bụla onye agbata obi ya na nwanne ya nwoke, na -asị, 'Mara Onyenwe anyị,' n'ihi na ha niile ga -ama m, malite n'onye kacha nta n'ime ha ruo n'onye kacha ukwuu. 12 N’ihi na m ga -emere ajọ omume ha ebere, agakwaghị m echeta mmehie ha. ” 13 N'ikwu banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ọ na -eme ka nke mbụ bụrụ ihe mgbe ochie. Na ihe na -akawanye nká ma na -aka nka dị njikere ịpụ n'anya.
(1 Pita 2: 4-5), ebe a na-ewuli ya elu dị ka ụlọ ime mmụọ, ka ọ bụrụ ọkwa nchụaja dị nsọ
4 Ka ị na -abịakwute ya, okwute dị ndụ nke mmadụ jụrụ, mana n'anya Chineke họọrọ na dị oke ọnụ ahịa, 5 unu onwe unu dị ka nkume dị ndụ ka a na -ewuli elu ka ọ bụrụ ụlọ ime mmụọ, ka unu bụrụ ọkwa nchụaja dị nsọ, na -achụ aja ime mmụọ nke Chineke na -anabata site n'aka Jizọs Kraịst.
1 Peter 2: 9 (ESV), ọkwa nchụ -aja nke eze, mba dị nsọ, ndị nke aka ya
9 Mana ị bụ agbụrụ ahọpụtara, òtù ndị nchụaja eze, mba dị nsọ, otu ndị nke aka ya, ka unu wee na -ekwusa ịdị mma nke onye ahụ kpọpụtara unu n'ọchịchịrị wee banye n'ìhè ya dị ebube.
Mkpughe 1: 5-6 (ESV), mere anyị alaeze, ndị nchụàjà nye Chineke na Nna ya
5 na site n'aka Jizọs Kraịst, onye akaebe kwesịrị ntụkwasị obi, ọkpara nke ndị nwụrụ anwụ, na onye na -achị ndị eze n'ụwa.
TOnye hụrụ anyị n'anya ma jiri ọbara ya mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie anyị 6 me -kwa -ra ayi ala -eze, ndi -nchu -àjà nye Chineke na Nna -Ya, ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
Mkpughe 5: 9-10. I mewo ha ka ha bụrụ alaeze na ndị nchụàjà nye Chineke anyị
9 Ha wee bụọ abụ ọhụrụ, sị, “I kwesiri ka ị were akwụkwọ mpịakọta a wee meghere akara ya maka gị egbuola, i ji ọbara gị gbapụta ndị mmadụ maka Chineke site n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 i we me ha ka ha buru ala -eze na ndi -nchu -àjà nye Chineke -ayi, ha gābu kwa eze n'elu uwa. "
Mkpughe 20: 6 (NIV) Ha ga -abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst
6 Ngọzi na nsọ ka onye ahụ bụ onye na -ekere oke na mbilite n'ọnwụ mbụ! N'ime ụdị ọnwụ nke abụọ a enweghị ike, mana ha ga -abụ ndị nchụàjà nke Chineke na nke Kraịst, ha ga -eso ya chịa otu puku afọ.
(Matiu 11: 28-30) Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga-emekwa ka unu zuru ike.
28 Bịakwutenụ m, unu niile ndị na -adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ, m ga -emekwa ka unu zuru ike. 29 Nyaranụ yok m, mụtakwanụ ihe n'ọnụ m, n'ihi na m dị nwayọọ, dịkwa umeala n'obi, unu gāchọta izu -ike nye nkpuru -obi -unu. 30 N'ihi na yoke nke m adịghị egbu mgbu, ibu m dịkwa mfe. "
Ndị Hibru 4: 7-11 (NIV), I.f Joshua nyere ha ezumike, Chineke agaraghị ekwu maka ụbọchị ọzọ ma emechaa
7 ọzọ, ọ na -ahọpụta otu ụbọchị, "Taa, ”Na -ekwu site n'ọnụ Devid ogologo oge ka nke ahụ gasịrị, n'okwu ndị e hotara,Taa, ọ bụrụ na ị nụrụ olu ya, unu emela ka obi -unu di ike. " 8 n'ihi na ọ bụrụ Jọshụa mere ka ha zuru ike, Chineke agaraghị ekwu maka ụbọchị ọzọ ma emechaa. 9 Ya mere, a ka nwere ezumike nke ụbọchị izu ike maka ndị nke Chineke, 10 koro owo ekededi eke odụkde nduọkodudu Abasi ọduọk odudu n̄ko ke mme utom esie kpa nte Abasi ọkọduọkde ke idemesie. 11 Ya mere, ka anyị gbalịsie ike ịbanye n'izu ike ahụ, ka onye ọ bụla ghara ịda n'otu ụdị nnupụisi ahụ.
(Ndị Hibru 4: 1-3) Anyị ndị kwere ekwe na -abanye n'izu ike ahụ
1 Ya mere, mgbe nkwa nke ịbanye n'izu ike ya ka dị, ka anyị tụọ egwu ka onye ọ bụla n'ime unu yie ka ọ rughị ebe ahụ. 2 N'ihi na ozi ọma bịakwutere anyị dị ka ọ bịakwara ha, mana ozi ha nụrụ abaghị ha uru, maka na ejikọghị ha n'okwukwe na ndị gere ntị. 3 N'ihi na anyị bụ ndị kwere ekwe na -abanye n'izu ike ahụ, dị ka o kwuworo, “dịka m siri swụọ iyi n'iwe m, 'Ha agaghị abanye n'izu ike m,'" n'agbanyeghị na ọrụ ya agwụla site na ntọala nke ụwa.
Ihe dị mkpa ugbu a bụ Kraịst na iwu ya. Ya na iwu ọhụrụ ya bụ mmezu nke onyinyo ahụ. N'ime ya ka anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka "ụbọchị izu ike" na -adịgide adịgide, ụbọchị niile n'izu. Mgbe ahụ, ka a sịkwa ihe mere na Matiu gụnyere okwu a ma ama nke Jizọs banyere ịbịakwute ya ịchọ izu ike n'otu okwu dị ka arụmụka banyere ịghọrọ ọka n'Ụbọchị Izu Ike (Mat 11: 28-12: 8).
Matiu na-atụ aka n'ike mmụọ nsọ nke ụbọchị izu ike ka ọ na-edekọ Jizọs na-ekwu na ndị nchụàjà nwere ike imebi ụbọchị izu ike wee bụrụ ndị na-enweghị ụta (Mat. 12: 5-6). Ndị nchụàjà ndị mebiri ụbọchị izu ike n'amaghị ama, ya bụ, ụbọchị izu ike ejighị ha mgbe ha na -arụ ọrụ n'ụlọikwuu ma ọ bụ n'ụlọ nsọ, bụ “ụdị” ọkwa nchụaja ọhụrụ nke ndị kwere ekwe niile. David na ndị ọrụ ibe ya mebikwara iwu agba ochie site na iri achịcha a na -egosi. Mana omume ha bụ “ụdị” ziri ezi nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ nnwere onwe pụọ n'iwu (Mat. 12: 4). Kraist enyewo ndi biakutere ya “izu ike” (Mt 11: 28-30). Nke a ọ́ gaghị abụ izu ike mgbe niile kama ịbụ izu ike kwa izu? Ọ ka mma idobe izu ike n'ime Kraịst kwa ụbọchị karịa ịgbaso leta nke iwu nke anọ nke a ga -emerịrị naanị otu ụbọchị n'izu?
Jizọs na ndị na -eso ụzọ ya mere ememme ikpeazụ ya n'oge Ememe Ngabiga. Ọ sịrị, “Aga m a drinkụ mkpụrụ nke osisi vaịn ruo mgbe alaeze Chineke bịara.” (Luk 22:18.) O wee were achịcha, mgbe o kelesịrị ekele, ọ nyawara ya wee nye ha, sị, “Nke a bụ ahụ m, nke enyere maka unu - mee nke a iji na -echeta m.” Luk 22:19) Otu iko ahụ mgbe ha risịrị nri, na -asị, “Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m. (Luk 22:20) Mgbe ọ bụla anyị na -ewere ahụ na ọbara Kraịst. anyị na-ekwusa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga-abịa (1Kọ 11: 23-26) Kraist bụ aja anyị. (1 Kọr 5: 7) Achịcha na-ekoghị eko bụ ezi obi na eziokwu (1Kọ 5: 8) N'ihi nke a anyị abụghị iri achịcha ma ọ bụ ị drinkụ iko nke Onyenwe anyị n'ụzọ na-erughị eru mana ka anyị buru ụzọ nyochaa onwe anyị. (1 Ndị Kọrịnt 11: 27-29) Nke a bụ ihe ọjọọ a ga-asachapụ-ọ bụghị ịghara ime iwu ochie e dere ede. (1Cor 5: 9-11)
Na 1 Ndị Kọrịnt 5: 7-8 Pọl tinyekwara otu ụkpụrụ 'ime mmụọ' maka Ememe Ngabiga kwa afọ na ụbọchị achịcha na-ekoghị eko dịka ọ na-eme n'ụbọchị izu ike. "A chụwo Kraịst Ngabiga anyị n'àjà." Ememe Ngabiga anyị nke Ndị Kraịst abụghịzi nwa atụrụ a na -egbu kwa afọ kama ọ bụ Onye nzọpụta egbugburu otu ugboro, n'ike ịnapụta anyị kwa ụbọchị, ọ bụghị otu ugboro n'afọ. "Ya mere, ka anyị mee ememme, ọ bụghị na ihe iko achịcha ochie, ma ọ bụ ihe iko achịcha nke ajọ omume na ajọ omume, kama jiri achịcha na -ekoghị eko nke ezi obi na eziokwu" (1 Ndị Kọrịnt 5: 8).
Anyị na -arịba ama na “achịcha na -ekoghị eko” nke nọchiri anya achịcha na -ekoghị eko bụ “achịcha na -ekoghị eko nke ezi obi na eziokwu.” Ndị a bụ ezigbo nsogbu ime mmụọ, ọ bụghị okwu nhicha ihe na -eko achịcha n'ụgbọ ala na ụlọ anyị otu izu n'afọ. Pọl kwuru na Ndị Kraịst kwesịrị 'ime ememe' na -adịgide adịgide. Ntụgharị asụsụ dị na KJV na -eduhie, na -enye echiche na anyị ga -eme "oriri." Nkwupụta nke Cambridge Bible maka ụlọ akwụkwọ na kọleji dabara adaba: “Ka anyị mee ememme [ihe na -aga n'ihu ugbu a n'asụsụ Grik], na -ezo aka na oriri ebighi ebi nke Nzukọ Ndị Kraịst na -eme… akpan usọrọ. ” (Mkpu. JJ Lias, Commentary on I Corinthians, Cambridge University Press, 1899, p 61 ịhụ ndị agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị (Gal 5:14).
(Luk 22: 15-20) Iko a wụpụụrụ unu bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m
15 O wee sị ha, “Ọ gụsịwo m agụụ ike iso unu rie oriri ngabiga a tupu mụ ataa ahụhụ. 16 N'ihi na asị m gị na agaghị m eri ya ruo mgbe e mezuru ya n'alaeze Chineke. ” 17 O werekwa iko, mgbe o kelesịrị ekele, ọ sịrị, “Were nke a kee ya n'etiti onwe unu. 18 N'ihi na asị m unu na site ugbu a gaa n'ihu, agaghị m a drinkụ mkpụrụ nke osisi vaịn ruo mgbe alaeze Chineke ga -abịa." 19 O we nara ob breade achicha, kele kwa, we nyawa ya, nye ha, si, Nka bu arum nke enyereri unu. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. " 20 Ọzọ kwa, iko ahu, mb theye ha risiri, si, Iko a nāwusara unu bu ọb covenantub covenanta -ndu ọhu nime ọbaram..
1 Ndị Kọrịnt 5: 6-8. N'ihi na a chụọla Kraịst, nwa atụrụ ngabiga anyị n'àjà
6 Inya isi unu adịghị mma. Ọ̀ bụ na unu amaghị na ntakịrị ihe iko achịcha na -eko achịcha dum? 7 Sachapụ ihe iko achịcha ochie ahụ ka unu wee bụrụ ntụ ọka ọhụrụ, ebe unu bụ n'ezie ekoghị eko. N'ihi na a chụọla Kraịst, nwa atụrụ ngabiga anyị n'àjà. 8 Ya mere, ka anyị mee mmemme ahụ, ọ bụghị na ihe iko achịcha ochie ahụ, ihe iko achịcha ọjọọ na ihe ọjọọ, kama jiri achịcha na -ekoghị eko nke ezi obi na eziokwu.
1 Ndị Kọrịnt 11: 23-32. Mee nke a, oge ọbụla ị na-a itụ ya, na ncheta nke m
23 N'ihi na ọ bụ n'aka Onyenwe anyị ka m natara ihe m nyefekwara unu, na Onyenwe anyị Jizọs n'abalị a ga -arara ya nye weere achịcha, 24 ndien ke ama ọkọnọ ekọm, enye obụn̄, onyụn̄ ọdọhọ ete: “Emi edi ikpọkidem mi, emi adade ọnọ mbufo. Na -emenụ nke a ka unu wee na -echeta m. ” 25 N'otu aka ahụ kwa, o buuru iko ahụ, mgbe o risịrị nri anyasị, sị, “Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ọbara m. Mee nke a, oge ọbụla ị na-a itụ ya, na ncheta nke m. " 26 N'ihi na mgbe ọ bụla unu na -ata achịcha a ma na -a drinkụ iko ahụ, unu na -ekwusa ọnwụ Onyenwe anyị ruo mgbe ọ ga -abịa.
27 Ya mere, onye ọ bụla riri achịcha ma ọ bụ drinksụọ iko Onyenwe anyị n'ụzọ na -erughị eru ga -ama ya ikpe gbasara ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị. 28 Ya mere, ka mmadụ nyochaa onwe ya, wee rie achịcha ahụ ma drinkụọ iko ahụ. 29 N anyoneihi na onye ọ bụla na -eri ihe ma na -a drinksụ na -amataghị ahụ na -eri, na -a drinksụkwa ikpe n'onwe ya.
Anyị kwesịrị iwere dị ka ihe kacha mkpa Pọl zoro aka n'okwu ndị ahụ bụ "Ụbọchị Izu Ike" na "ụbọchị nsọ" n'akwụkwọ ya niile echekwara. Nke a pụtara na Ndị Kọlọsi 2:16. N'amaokwu a, Pọl kọwara ụbọchị nsọ (ememe kwa afọ), ọnwa ọhụrụ (idebe kwa ọnwa) na Ụbọchị Izu Ike (idebe kwa izu) dịka "onyinyo." N'ime ime nke a, ọ na -ekpughe uche ndịozi n'okwu a dị mkpa.
16 Ya mere, ka onye ọ bụla ghara ikpe gị ikpe n'ihe banyere nri na ihe ọ drinkụ drinkụ, ma ọ bụ maka ememme ma ọ bụ ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike. 17 Ndị a bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. (Ndị Kọlọsi 2: 16-17)
Ọ ga-adị ka ihe dị ịtụnanya na ọ bụrụ na Pọl chere na idebe ụbọchị izu ike bụ ihe achọrọ maka nzọpụta, ọ nwere ike ịkọwa izu-ụka izu ụka na ụbọchị nsọ dị ka onyinyo! Nke a nwere ike iduga nghọtahie dị egwu. Ka o sina dị, eziokwu doro anya karịa obi abụọ ọ bụla. N'ezie Pọl kpọrọ ụbọchị izu ike, ụbọchị nsọ na ọnwa ọhụrụ dị ka onyinyo. Onyinyo na -akwụsị ịdị mkpa mgbe eziokwu, Kraịst, pụtara. Pọl na -eji otu asụsụ nke onyinyo na eziokwu nke anyị na -ahụ na Ndị Hibru 10: 1 ebe ịchụ aja "anụ ahụ" nke Kraist (Heb 10:10): inwe onyinyo nke ezi ihe gaje ịbịa… ”(Hib 10: 1).
N'ebe a iwu ịchụ aja bụ nke nwa oge wee mee ka enweghị isi site n'ọdịdị Kraịst. Mana Pọl kwuru otu ihe ahụ maka emume ụbọchị pụrụ iche na Ndị Kọlọsi 2: 16-17. Iwu nke kwuru idebe ụbọchị nsọ, ọnwa ọhụrụ na ụbọchị izu ike nọchiri anya ịdị adị nke Kraịst na Alaeze ya - ihe ọma ndị na -abịa. Isi ihe dị ka idebe Ụbọchị Izu Ike dị oke mkpa na anyị kwesịrị ileghachi anya ọzọ na Ndị Kọlọsi 2: 16-17: “[N'ihi na Kraịst akagbuola akwụkwọ ikike nke megidere anyị, v. 14], yabụ ka onye ọ bụla ghara ime dị ka onye ikpe gị gbasara nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ma ọ bụ n'ihe gbasara ememme, ọnwa ọhụrụ ma ọ bụ ụbọchị izu ike - ihe bụ onyinyo nke ihe gaje ịbịa, mana ihe ahụ bụ nke Kraịst. ”
N'ebe ahụ ọ dị na oji na ọcha. Nke a bụ ozi agba ikpeazụ nke enyere gbasara idebe Ụbọchị Izu Ike. Uru ụbọchị izu ike bara nye Ndị Kraịst, yana ụbọchị nsọ na ọnwa ọhụrụ, bụ ihe yiri onyinyo. Ụbọchị ndị a enwekwaghị ihe ọ bụla, yabụ na ọ gaghị abara ndị na -agbalị idebe ha uru.
Dean Alford na Commentary on the Greek Testament: Ndị Kọlọsi 2: 16-17. Eziokwu izu ike nke otu ụbọchị, ma ọ bụ nke asaa ma ọ bụ nke mbụ, ga -anọrịrị n'okwu nkwupụta ya ebe a: njigide ihe dị otú ahụ ka ga -ejigide onyinyo ahụ, ebe anyị nwere ihe ahụ. ”
Ọ bụrụ na achọrọ ka ndị Jentaịl bụ Ndị Kraịst na ntughari ka ha zuo ike n'ụbọchị izu ike, nke a ga -achọ ntuziaka akọwapụtara nke ọma site na kansụl Ọrụ 15 nke kpebiri etu iwu ji onye Jentaịl kwere ekwe ịgbaso omume nke okpukpe ndị Juu. Idebe Ụbọchị Izu Ike, dịka mkpebi ndịozi siri dị, abụghị ihe achọrọ n'aka ndị Jentaịl kwere ekwe. Anyị kwesịrị icheta na enyere ndị Jentaịl aka ịga n'ụlọ nzukọ ndị Juu, mana nke ikpeazụ enyeghị ha iwu ka ha bụrụ ndị na-edebe ụbọchị izu ike. Ọ bụ nanị ndị na -eso ụzọ ndị Juu kpam kpam nabatara idebe Ụbọchị Izu Ike. Ndị Juu n'onwe ha maara na Chineke enyela ha ụbọchị izu ike, ha atụghịkwa anya idebe ụbọchị izu ike nke mba ndị ọzọ. Ya mere, ọ gaara achọ iwu pụrụ iche maka ndị Jentaịl ma ọ bụrụ na idebe Ụbọchị Izu Ike dị mkpa maka ha dị ka Ndị Kraịst.
N'ime akwụkwọ Jọn, a kọwara mmemme dị ka ndị Juu - Jọn 7: 2 (Ụlọikwuu), Jọn 6: 4 (Ngabiga), Jọn 5: 1 (Ngabiga). A na -akpọ ụbọchị nkwadebe maka ụbọchị izu ike “ụbọchị nkwadebe ndị Juu” (Jọn 19:42). John na -eche ụbọchị izu ike dịka onye Juu nwere ụbọchị nkwadebe ndị Juu bu ya ụzọ. Okwu ndị a adabaghị adaba na nkwenye na emume agba ochie dị ugbu a na ọgbakọ Ndị Kraịst. Ya na Pọl, Jọn na -ahụ ụbọchị dị ka onyinyo nke eziokwu dị ukwuu nke Kraịst.
Enwere nnwere onwe n'ime Kraịst nke Ndị Kraịst nwere ike ịnụ ụtọ ya ma nyefee ndị ọzọ. Idosi ike n'ememe agba ochie na -egbochi mmụọ nke Kraịst na Oziọma. Anyị anọghị n'okpuru iwu (Ndị Rom 6:14). A tọhapụrụ anyị "n'iwu" (Ndị Rom 7: 6). Anyị “nwụrụ n'iwu site n'ahụ Kraịst, ka anyị wee sonyere onye ọzọ, onye akpọlitere n'ọnwụ, ka anyị wee mịa mkpụrụ nye Chineke" (Ndị Rom 7: 4). Nye ndị “chọrọ ịnọ n'okpuru iwu” (Gal 4:21) anyị na-akwado okwu Pọl dị mkpa na Ndị Galetia 4: 21-31: Ọgbụgba ndụ ugwu Saịnaị na-eduga n'ịbụ ohu. Maka ụmụ nke nkwa ahụ enwere nnwere onwe ọhụrụ na ebube dị n'ime Kraịst. Enwere ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime mmụọ. Ejiri ihe ka mma dochie ọgbụgba ndụ ochie na usoro iwu ya (Ndị Hibru 8:13). Anyị ejighị iwu "idebe iwu niile" (Gal 5: 3). Ọ bụrụ na anyị nwaa ime otu a, anyị 'adawo n'amara' (Gal 5: 4). Ugbu a okwukwe abịala, anyị anọkwaghị n'okpuru iwu, ụbọchị izu ike na ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Iso Ụzọ Kraịst na -elekọta iwu (Gal 3: 24, 25). Ndị na -esi ọnwụ na iwu n'ụdị nke mbụ nwere ike bụrụ nke ọgbụgba ndụ ahụ site n'Ugwu Saịnaị (Gal 4:24). Childrenmụ ọgbụgba ndụ iwu enweghị ike ịbụ ndị nketa na ụmụ nke nwanyị nweere onwe ya (Gal 4:30). Ndị na -arapara n'usoro iwu nke Saịnaị abụghị ezigbo ndị na -azọ alaeze Chineke.
N'ezie o doro anya na ụdị ụbọchị ezumike ọ bụla nke ọgbụgba ndụ ochie anaghịzịkwa ndị na -achọ izu ike n'ime Kraịst, na -akwụsị ọrụ ha kwa ụbọchị (Hib 4: 9, 10). N'okwu onye ọkà mmụta okpukpe nke narị afọ nke iri na isii, Ụbọchị Izu Ike pụtara "ka m kwụsị ọrụ ọjọọ m ụbọchị niile nke ndụ m, hapụ Onyenwe anyị ka ọ rụọ ọrụ n'ime m site na Mmụọ ya, wee si otú a malite na ndụ a izu ike ebighi ebi. ” (Zacharias Ursinus na Heidelberg Catechism, 1563)
Enwere nnukwu ihe egwu metụtara ndị otu na ndị nkuzi nke na -akwado na Ndị Kraịst kwesịrị ịdị na -edebe iwu Tora na -erube isi n'iwu nke Iwu Mosis nke na -enweghị mmetụta omume.
Ihe egwu dị n'iwu bụ na ọ nwere ike ịkwalite izi ezi nke onwe onye dabere na idebe iwu nke ọgbụgba ndụ ochie - nke a bụ Oziọma ụgha.
Ihe ọmụma na -afụli elu, ma ịhụnanya na -ewuli elu. Ọ bụrụ na onye ọ bụla echee na ọ ma ihe, ọ mabeghị ihe o kwesịrị ịma. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya, Chineke maara ya. (Gụọ 1 Ndị Kọrịnt 8: 1-3.) “Ndị ọka iwu” ndị amụrụ nke ọma n'Iwu ahụ na -achọkarị mpako karịa ịdị na -eje ije n'ịdị umeala n'obi. Iwu bụ ihe ịsụ ngọngọ n'akụkụ a. Ihe ọmụma nke iwu Mosis ghọrọ ihe mpako maka ọtụtụ ndị Farisii nke oge a.
Ikwusi okwu ike na Iwu Mosis na -emebi Oziọma Jizọs Kraịst. Ndị na -ekpe okpukpe ndị Juu na -achọkarị imesi koodu ochie ike karịa karịa nkuzi nke Kraist. Ha na -akụziri idebe Torah kama ozi dị mkpa nke Oziọma gụnyere nchegharị, ime baptizim n'aha Jizọs na ịnata Mmụọ Nsọ. (Ọrụ 2:38) Jizọs, onye e buliri elu n'aka nri Chineke ma bụrụkwa onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ bụ ikike anyị. (1Tim 2: 5-6) Anyị ga-eso nkuzi ya ma mesie ihe ya na ndị ozi ya mesiri ike ike.
Ikwusi okwu ike na koodu ochie ahụ na -ekpuchi eziokwu na anyị ga -eje ozi n'ụzọ ọhụrụ nke mmụọ. Ugbu a, a tọhapụrụ anyị n'iwu- anyị agaghịzi na-eje ozi n'ụzọ ochie nke koodu edere ede. (Ndị Rom 7: 6) Ọ bụ Mmụọ na -enye ndụ; anụ ahụ abụghị enyemaka ma ọlị. Okwu Jizọs kwuru bụ mmụọ na ndụ. (Jọn 6:63) Anyị na -anata mmụọ site n'ịnụ ihe n'okwukwe, ọ bụghị ọrụ nke iwu. (Gal 3: 2-6) Ọ bụ naanị site na ịmụ mmụọ ọzọ ka anyị ga-eketa ndụ ebighi ebi (Jọn 3: 3-8)
Legalism bụ ọnya nke ọtụtụ na -adaba n'ime ya nke ga -ama ha ikpe karịa ịhụ na ha ziri ezi. Ezi omume anyị site n'ọrụ nke anụ ahụ dị ka akwa ruru unyi na izi ezi na -abịa site n'okwukwe ọ bụghị n'ọrụ nke iwu. (Gal 2: 16, Gal 3: 10) Onye natara akara ọgbụgba ndụ agba ochie - ibi úgwù anụ ahụ - "dịịrị idebe iwu niile" (Gal 5: 3). Ndị na -ekwusi ike na iwu, na echiche nke agba ochie dị ka ụkpụrụ ụkpụrụ, “ewepụrụla onwe ha site na Kraịst… Ndị a bụ ịdọ aka na ntị siri ike nke Pọl nye onye ọ bụla nke na -amanye ọrụ dịịrị iwu nke Jizọs anaghị achọ n'aka ụmụazụ ya.
Dị ka Jizọs kwuru, lezienụ anya ma lezie anya maka ihe iko achịcha ndị Farisii na ndị Sadusii. ” (Matiu 16: 6) N'ikwu nke a, ọ naghị agwa ha ka ha kpachara anya maka achịcha na -eko achịcha, kama maka nkuzi nke ndị Farisii na ndị Sadusii (Mat 16:12) Ejila ihu anya ekpe ikpe, kama jiri ezi ikpe kpee ikpe. (Jọn 7:24)
1 Ndị Kọrịnt 1: 27-31. Kraịst Jizọs - nye anyị amamihe sitere na Chineke, ezi omume na ido nsọ na mgbapụta
27 Ma Chineke họọrọ ihe nzuzu dị n'ụwa iji menye ndị maara ihe ihere; Chineke họọrọ ihe na -adịghị ike n'ụwa ka o mee onye ihere ihere; 28 Chineke họọrọ ihe dị ala na nke a na -eleda anya n'ụwa, ọbụna ihe ndị na -adịghị, ka ọ ghara imebi ihe ndị dị adị, 29 so ka onye ọ bụla ghara ịnya isi n'ihu Chineke. 30 Ma site na ya unu nọ n'ime Kraịst Jizọs, onye ghọrọ anyị amamihe sitere na Chineke, ezi omume na ido nsọ na mgbapụta, 31 ka, dika edeworo ya n'akwukwọ nsọ, ka onye nānya isi, ya nya isi nime Onye -nwe -ayi.
Hosia 6: 6
6 N'ihi na achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ àjà, ihe ọmụma Chineke karịa àjà nsure ọkụ.
Maịka 6: 6-8 (NIV)
6 “Gịnị ka m ga -eji bịa n'ihu Jehova,
na mu onwem n bowruru ala n'iru Chineke n'elu?
M̀ ga -eji àjà nsure ọkụ bịa n'ihu ya,
na ụmụ ehi gbara otu afọ?
7 Ihe puku kwuru puku ebule ọ̀ ga -amasị Jehova,
na iri puku osimiri iri?
M̀ ga -enye ọkpara m maka njehie m,
mkpụrụ nke ahụ m maka mmehie nke mkpụrụ obi m? ”
8 O mmadụ, ọ gwawo gị ihe dị mma;
gini kwa ka Jehova na -acho n'aka gi
kama ime ihe ekpere n'ikpe, na ihu ebere n'anya;
na iji obi umeala soro Chineke gị jee ije?
Matiu 9: 11-13
1 Mgbe ndị Farisii hụrụ nke a, ha sịrị ndị na -eso ụzọ ya, “Gịnị mere onye ozizi gị ji eso ndị ọnaụtụ na ndị mmehie eri nri?” 12 Ma mgbe ọ nụrụ ya, ọ sịrị, “Ndị ahụike adịghị mkpa dibịa, kama ọ bụ ndị ọrịa. 13 Gaanụ mụta ihe nke a pụtara: 'Achọrọ m ebere, ọ bụghị ịchụ aja.' N'ihi na abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie. "
Matiu 12: 1-7
1 N’oge ahụ, Jizọs gafere n’etiti ubi ọka n’ụbọchị izu ike. Agụụ gụkwara ndị na -eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ụyọkọ ọka wit na -eri. 2 Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya, “Lee, ndị na -eso ụzọ gị na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike.” 3 Ọ sịrị ha, “Ọ bụ na unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na -agụ ya, na ndị ya na ha nọ: 4 otu o siri banye n'ụlọ Chineke wee rie achịcha nke Presence, nke iwu na -akwadoghị ka o rie ma ọ bụ maka ndị ya na ha nọ, kama naanị maka ndị nchụàjà? 5 Ma -ọbu ùnu agughi n'Iwu ahu otú ndi -nchu -àjà n'ulo uku Chineke si eme ka ubọchi -izu -ike ghara idi nsọ n'ubọchi -izu -ike, ghara kwa ikpe ikpe? 6 Asim unu, na ihe kariri ulo uku Chineke nọ n'ebe a. 7 Ọ buru kwa na unu matara ihe okwu a bu, Anamachọ ebere, ọ bughi àjà, unu agaghi -amawori ndi ikpe nāmaghi.
Aisaia 1: 10-17
10 Nụrụ okwu Jehova,
unu ndi -isi Sọdọm!
Giveaa ntị n'ozizi Chineke anyị,
unu ndị Gọmọra!
11 "Gini ka ọ bu?
ọ bu ihe si n'ọnu Jehova puta;
Afọ ejula m n'àjà nsure ọkụ nke ebule
na abuba anu-ọhia mara abuba;
Ọbara oke ehi adịghị atọ m ụtọ,
ma ọ bụ nke ụmụ atụrụ, ma ọ bụ ewu.
12 "Mgbe ị bịara ịpụta n'ihu m,
onye choro gi
ebe a na -azọ ụkwụ nke ụlọ ikpe m?
13 Ewetala onyinye efu ọzọ;
incense bụ ihe arụ n'anya m.
Ọnwa ọhụrụ na ụbọchị izu ike na ọkpụkpọ oku—
Apụghị m ịnagide ajọ omume na nzukọ ukwu.
14 Ọnwa ọhụrụ ọhụrụ gị na mmemme ị họpụtara
mkpụrụ obi m kpọrọ asị;
ha aghọwo m ibu dị arọ;
Ike agwula m.
15 Mgbe ị gbasara aka gị,
M ga -ewepụ anya m n'ebe ị nọ;
n'agbanyeghị na ị na -ekpe ọtụtụ ekpere,
Agaghị m ege ntị;
aka gị jupụtara n'ọbara.
16 Sanu onwe -unu; mee onwe unu ka unu dị ọcha;
wezuga ihe ọjọ nke omume -unu n'iru anyam;
kwusi ime ihe ọjọ,
17 mụta ime ihe ọma;
mee ikpe -azụ nye nwa -nb fatherei,
gbachitere ikpe nwanyị di ya nwụrụ
Jizọs na ndị na -eso ụzọ ya na -arụ ọrụ n'ụbọchị izu ike
Mak 2: 23-28 (Mb)-Otu ụbọchị izu ike ka ọ na-aga n'ọhịa ọka, ka ha na-aga, ndị na-eso ụzọ ya malitere ịhọtụ ọka. Ndi -Farisi we si Ya, Le, gini mere ha n doingme ihe n notmeghi Iwu kwadoro n'Ụbọchị Izu Ike? ” O wee sị ha, “Ọ bụ na unu agụtabeghị ihe Devid mere, mgbe ọ nọ na mkpa, agụụ na -agụkwa ya, ya na ndị ya na ha nọ: otu o siri banye n'ụlọ Chineke, n'oge Abaiata onye isi nchụaja. richaa achịcha Nchileke, wnke ọ dighi ihe ziri ezi n'iwu ka onye ọ bula rie, ma -ọbughi ndi -nchu -àjà, nyekwara ndị ya na ha nọ? ” O wee sị ha, "E mere mmadụ izu ike maka mmadụ, emeghị mmadụ maka ụbọchị izu ike. Yabụ na Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. "
Matiu 12: 1-8 IGBOB-N'oge ahu Jisus nāga n'etiti ubi ọka n'ubọchi-izu-ike. Agụụ gụkwara ndị na -eso ụzọ ya, ha wee malite ịghọrọ ụyọkọ ọka wit na -eri. Ma mgbe ndị Farisii hụrụ ya, ha sịrị ya,Lee, ndị na -eso ụzọ gị na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike. ” Ọ sịrị ha, “Ọ bụ na unu agụtabeghị ihe Devid mere mgbe agụụ na -agụ ya, na ndị ya na ha nọ: otu o si banye n'ụlọ Chineke wee rie achịcha nke ọnụnọ, nke iwu na -akwadoghị ka o rie ma ọ bụ rie. maka ndị ya na ha nọ, ma ọ bụ naanị maka ndị ụkọchukwu? Ma ọ bụ, ị gụbeghị na Iwu ahụ ka ọ dị n'Ụbọchị Izu Ike ndị nchụàjà nọ n'ụlọ nsọ ahụ na -emerụ ụbọchị izu ike ma bụrụ ndị ikpe na -amaghị? Ana m agwa gị, e nwere ihe karịrị ụlọ nsọ a. Ma ọ bụrụ na ị maara ihe nke a pụtara, Achọrọ m ebere, ọ bụghị àjà, 'ị garaghị ama ndị ikpe na -amaghị ikpe. N'ihi na Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. ”
Luk 6: 1-5 IGBOB-N'ubọchi-izu-ike, mb hee Ọ nāga n'etiti ubi ọka, ndi n disciplesso uzọ-Ya werekọturu ufọdu nime ọka, nā rubu ya n'aka-ha. Ma ụfọdụ ndị Farisii kwuru sị,Gịnị mere unu ji na -eme ihe iwu na -akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike? ” Jisus we za ha, si, younu agughi ihe Devid mere mb hee agu nāgu ya, ya onwe -ya na ndi ya na ha nọ: ka o si bata n'ulo Chineke, were, rie achicha nke idi n'iru, nke iwu akwadoghị ka onye ọ bụla rie ma e wezụga ndị nchụàjà? ” O wee sị ha, "Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. "
Jọn 5: 16-17-Ọ bụ ya mere ndị Juu ji akpagbu Jizọs, n'ihi na ọ na -eme ihe ndị a n'ụbọchị izu ike. Ma Jizọs zara ha, sị: “Nna m na -arụ ọrụ ruo ugbu a, ana m arụ ọrụ. "
(Jọn 9:16) Ụfọdụ ndị Farisii sịrị, “Nwoke a esighị na Chineke pụta ọ naghị edebe Ụbọchị Izu Ike. ” Ma ndị ọzọ na -asị, “Olee otu onye na -eme mmehie ga -esi mee ihe iriba ama ndị a?” Nkewa putara n'etiti ha.
Jizọs kwupụtara na ihe oriri niile dị ọcha
(Mak 7: 15-23) Ọ dịghị ihe dị na mpụga mmadụ nke site na ịbanye n'ime ya nwere ike merụọ ya, ma ihe na -esi n’ime mmadụ apụta na -emerụ ya. ” Ma mgbe ọ banyere n'ime ụlọ ma hapụ ndị mmadụ, ndị na -eso ụzọ ya jụrụ ya gbasara ilu ahụ. O we si ha, Thennu onwe -unu kwa, ùnu enweghi nghọta? Ị hụghị na ihe ọ bụla si n'ime mmadụ bata n'ime mmadụ enweghị ike imerụ ya, ebe ọ bụ na ọ banyeghị n'obi ya kama afọ ya, wee chụpụ ya? ” (N'ihi ya, o kwupụtara na ihe oriri niile dị ọcha.) O wee sị, “Ihe si n'ime mmadụ pụta na -emerụ ya. N'ihi na n'ime, n'ime obi mmadụ, echiche ọjọọ na -apụta, ịkwa iko, izu ohi, igbu ọchụ, ịkwa iko, anyaukwu, ajọ omume, aghụghọ, agụụ mmekọahụ, anyaụfụ, nkwutọ, mpako, nzuzu. Ihe ọjọọ ndị a niile na -esi n’ime apụta, na -emerụ mmadụ. ”
Luk 11: 37-41-Mgbe Jizọs ka na-ekwu okwu, otu onye Farisii rịọrọ ya ka o soro ya rie nri. O juru onye Farisii ahụ anya ịhụ na o bughị ụzọ saa aka tupu nri abalị. Onyenwe anyị wee sị ya, “Ugbu a, unu ndị Farisii, na -eme ka azụ iko na efere dị ọcha, mana n'ime gị juputara na anyaukwu na ajọ omume. Ndị nzuzu! Ọ́ bụghị onye ahụ nke mere azụ ya mekwara ime ya? Mana nye ihe dị n'ime dị ka onyinye afọ -ofufo, ma lee, ihe niile dịịrị unu ọcha.
Jizọs na -akụzi megide ime ihe ike
Matiu 5: 38-39-“Unu nụrụ na a sịrị, 'Anya laara anya, ezé lara ezé.' Ma a sị m gị, Emegwarala onye bụ ajọ mmadụ ihe. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amaa gị ụra na ntì aka nri, tụgharịkwaara ya ntị nke ọzọ.
Matiu 5: 43-45 43 “Unu nụrụ na a sịrị, 'Hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị.' 44 Ma asim unu, Hunu ndi -iro -unu n'anya, kpere ndi n persecsob prayu unu ekpere, 45 ka unu wee bụrụ ụmụ nke Nna unu nọ n'eluigwe. N'ihi na ọ na -eme ka anyanwụ ya na -awakwasị ndị ọjọọ na ndị ọma, na -emekwa ka mmiri zoo n'ahụ ndị ezi omume na ndị ajọ omume.
Matiu 26:52 IGBOB - Jisus we si ya, Mighachi mma -agha -gi n'ọnọdu -ya. N'ihi na ndị niile na -eji mma agha ga -ala n'iyi site na mma agha.
Luk 6: 27-31, 36-“Ma asị m unu ndị na-anụ, Hụ ndị iro gị n'anya, meere ndị kpọrọ gị asị ihe ọma, gọzie ndị na -akọcha gị, kpee ekpere maka ndị na -akparị gị. Onye kụrụ gị ihe na ntì, nyekwa ya nke ọzọ, otu onye na -anapụ gị uwe elu gị, egbochila gị uwe ime gị. Nye onye ọ bụla na -arịọ gị arịrịọ, na onye na -anapụ gị ngwongwo gị arịọla ya ọzọ. Dịkwa ka ịchọrọ ka ndị ọzọ mee gị, mee ha ... Nwee obi -ebere, dịka Nna -unu nwere obi ebere.
Jizọs kagburu iwu gbasara ịgba alụkwaghịm
Mak 10: 2-12 IGBOB-Ndi-Farisi we bia ka ha nwaa Ya, si, it ziri ezi n'iwu ka nwoke rapu nwunye-ya? Ọ zara ha sị, “Kedu ihe Moses nyere gị n'iwu? ” Ha sịrị, "Mozis kwere ka otu nwoke dee akwụkwọ ịgba alụkwaghịm ma chụpụ ya. ” Jisus we si ha, N'ihi obi -etili -unu ka o dere unu iwu a n'akwukwọ. Ma site na mmalite okike, 'Chineke kere ha nwoke na nwanyị.' 'Ya mere nwoke ga -ahapụ nna ya na nne ya wee rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ ga -abụ otu anụ ahụ.' Ya mere, ha abụkwaghị anụ ahụ abụọ kama otu. Ya mere, ihe Chineke kekọtara, mmadụ atọsala. ” N'ụlọ, ndị na -eso ụzọ jụọ ya ajụjụ ọzọ banyere okwu a. O wee sị ha, "Onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm wee lụọ nwunye ọzọ na -akwa iko megide ya, ma ọ bụrụ ọ gbara di ya alụkwaghịm wee lụọ nwanyị ọzọ, ọ na -akwa iko. "
Matiu 5: 31-32-“E kwukwara sị, 'Onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, ya nye ya akwụkwọ ịgba alụkwaghịm.' Ma asị m unu na onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, ewezuga n'ihi ịkwa iko, na -eme ka ọ kwaa iko, onye ọ bụla nke lụkwara nwunye a gbara alụkwaghịm na -akwa iko..
Matiu 19: 3-9-Ndị Farisii bịakwutere ya wee nwalee ya site n'ịjụ ya, "Iwu kwadoro ịgba alụkwaghịm nwunye maka ihe ọ bụla?" Ọ zara, “Ọ bụ na unu agụbeghị na onye kere ha site na mbụ mere ha nwoke na nwanyị, sị, 'Ya mere nwoke ga -ahapụ nna ya na nne ya wee jidesie nwunye ya ike, ha abụọ ga -aghọkwa otu anụ ahụ. '? Ya mere ha abụkwaghị anụ ahụ abụọ kama otu. Ya mere, ihe Chineke kekọtara, mmadụ atọsala. ” Ha sịrị ya, “Gịnịzi mere Mozis ji nye iwu ka mmadụ nye akwụkwọ ịgba alụkwaghịm ma chụpụ ya?” Ọ sịrị ha, “N'ihi obi kpọrọ nkụ gị, Mozis kwere ka ị gbaa ndị nwunye gị alụ, mana ọ bụghị otu a site na mmalite. A sị m gị: onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm, ewezuga ịkwa iko, wee lụọ nwunye ọzọ, na -akwa iko. "
(Luk 16:18)Onye ọ bụla nke gbara nwunye ya alụkwaghịm wee lụọ nwunye ọzọ na -akwa iko, na onye lụrụ nwanyị di ya gbara alụkwaghịm na -akwa iko.
Jizọs kụziri ka ọ ghara ikpe ikpe
(Matiu 7: 1-5)Ekpela ikpe, ka a ghara ikpe gị ikpe. N'ihi na ikpe ị na -ekwu, a ga -eji kpee gị ikpe, ihe unu jikwa atụ̀ ihe ka a ga -eji tụọrọ unu. Gịnị mere ị na -ahụ irighiri ahịhịa nke dị n'anya nwanna gị, mana ị hụghị osisi nke dị n'anya nke gị? Ma ọ bụ olee otu ị ga -esi sị nwanne gị, 'Ka m wepụ ntụpọ dị n'anya gị', mgbe osisi dị n'anya nke gị? Onye ihu abụọ, buru ụzọ wepụ ntụhie dị n'anya nke gị, mgbe ahụ ị ga -ahụ nke ọma ka ị wepụ ntụpọ dị n'anya nwanna gị.
(Luk 6: 37-38)Ekpela ikpe, a gaghị ekpekwa gị ikpe; unu amala ikpé, agaghi -ama kwa unu ikpé; gbaghara, a ga -agbagharakwa gị; nye, a ga -enyekwa gị ya. A ga -etinye ezigbo ihe ọ̀tụ̀tụ̀, nke a bịadara ala, yọkọta ọnụ, nke na -awụda n'elu, n'apata ụkwụ gị. N'ihi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ị na -eji ka a ga -eji tụọrọ gị ya. "
Iwu ndị ọzọ nke Jisus
Iwu Jizọs, dị ka akọwapụtara na Matiu isi 5-7 metụtara inwe obi dị ọcha na omume ziri ezi. Ndị a na-ekpuchi isiokwu dịka iwe (Mt 5: 21-26), agụụ ihe ọjọọ (Mt 5: 27-30), ịgba alụkwaghịm (Mt 5: 31-32), iyi (Mt 5: 33-37), mmegwara (Mt 5: 38-42), ndị iro na-ahụ n'anya (Mt 5: 43-48), inye ndị nọ na mkpa aka (Mt 6: 1-4), ikpe ekpere (Mt 6: 5-13), mgbaghara (Mt 6:14), ibu ọnụ (Mt 6: 16-18), nchegbu (Mt 6: 25-34), ikpe ndị ọzọ ikpe (Mt 7: 1-5), iwu ọla edo (Mt 7: 12-14), na ịmị mkpụrụ (Mt 7: 15-20 )
Ụfọdụ paragraf ndị dị n'elu bụ ihe ebook, Iwu, Ụbọchị Izu Ike na Ọgbụgba Ndụ Ọhụrụ, Onye -isi. Anthony Buzzard, jiri ikike